စကာင်္ပူမှကျနော်သဘောကျသောအချက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စကာင်္ပူမှကျနော်သဘောကျသောအချက်များ
Posted by fatty on May 16, 2011 in Copy/Paste | 51 comments
The Voice ဂျာနယ်မှာ စကာင်္ပူသွားဆောင်းပါးတခု လစဉ်ဖေါ်ပြပေးနေတာတွေ့ရပါတယ် ..။ ဖတ်တဲ့သူတွေ အတော်လေးဗဟုသုတရစေပါတယ်။
တွေရှိခဲ့ပါတယ် ..။ ပထမဆုံးတခုက … အထပ် ၂၀
၂၅ ထပ်ရှိတဲ့တိုက် ၄ ..၅ လုံးလောက်စုထားရင် ကစားကွင်းတခုမဖြစ်မနေပါရတာရယ် … ကား ရပ်နားဖို့ ၈ ထပ် တိုက်တခု မဖြစ်မနေပါရပါတယ် ..။
ကြိုတင်ချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ plan ကောင်းတခုပါ။
ပြီးတော့ အဲဒီ မှာနေသူတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်အခန်း
ကနေထွက်ရင် မိုးရွာနေရင် ထီးသု့းဖို့မလိုအောင် လုပ်
ထားပေးပါတယ် ..။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ထိ ပေါင်းကူးလျှောက်လမ်းတွေလုပ်ပေးထားလို့ပါဘဲ ..။
အဲဒါမျိုးက တနိုင်ငံလုံးလိုလိုမှာလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် ..။ ကိုယ့်အခန်းနဲ့ ကားမှတ်တိုင်က အတော်လေးဝေး
နေသေးရင် ကြားမှာ နားနေဆောင်လေးတွေတောင်
ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးလိုလို မျက်ခင်းကိုလှလှပပ ထိမ်း
သိမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ် ..။ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့
မျက်ခင်းမျိုး .. ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ မြေအနေအထားမျိုးတွေ့ရခဲပါတယ် ..။ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်လဲ စိတ်အေးလက်အေးထွက်နိုင်ပါတယ် .. ဆိုလိုတာက
ခလုတ်တိုက်မှာစိုးလို့ အောက်ငုံ့ကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့ … ဒါတွေကတော့
ဟိုဖက်ခြံကို သွားငေးပြီး ကိုယ့်ခြံကိုလည်း သူ့လိုလှပစေချင်နေတယ် မဟုတ်လား။
ကျွန်မ အသိဦးလေးကြီးတစ်ယောက် စင်ကာပူသွားလည်ပြီး ပြန်လာတော့ သူ့ကို စင်ကာပူ ဘယ်လိုနေလဲလို့ မေးကြည့်တော့ …
ဟာ … စင်ကာပူဆိုတာ နတ်ပြည်တဲ့ …
အားရပါးရ စင်ကာပူကောင်းကြောင်းတွေ ပြောပြတာ စုံနေတာပဲ …
လူတွေရဲ့အမြင် အတွေးအခေါ်၊ နိုင်ငံရဲ ့တိုးတက်မှုနဲ့လူနေမှု စနစ်တွေဟာ မြို ့ပြတည်ဆောက်မှုမှာ
အရမ်း စကားပြောပါတယ်။ အိမ်ယာတည်ဆောက်မှု ပုံစံဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမကောင်း ဆိုတာပေါ်
မူတည်ပြီး လူနေ အိမ်ယာတွေဟာ သွားရေးလာရေး လွယ်ကူစေမဲ့ ကားဂိတ်အနား၊ လမ်းမကြီး အနားကို ချဉ်းကပ်
လာပါတယ်။ ကျွန်တော် နေခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမှာ ကိုဖတ်ပြောသလိုပဲ Apartment အတွဲကြီးတွေ (မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
အဲဒီလောက်တောင် မရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို Condominium လို ့အမည်တပ်ထားပါတယ်) ၄တွဲ လောက်ရှိရင်
ပဲ အလယ်မှာ ကလေးသူငယ်တွေ ကစားနိုင်တဲ့ ကစားကွင်း အပြင် ပန်းခြံ အသေးစားလေးတွေပါ မရှိမဖြစ် ထည့်
သွင်း တည်ဆောက်ရပါတယ်။ အဲဒီ အဆောက်အဦ မျိုးတွေဟာ မြို ့လယ်မှာ လုံးဝ မရှိသလောက်ပါပဲ။
နေထိုင်သူတွေ နားအေး စိတ်ချမ်းသာအောင် မြို ့ထဲ လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာတွေမှာ
တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီလို Apartment ပေါင်းစုံ စုစည်းထားတဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးထဲကို ရွာကားလို ့ခေါ်တဲ့
မိန်းလမ်းမကြီး ရှိတဲ့နေရာအထိကို ပြောင်းစီးနိုင်အောင်လို့ခေါက်တုံ့၁၅ မိနစ်ခြား တစ်စီး ပြေးဆွဲပါတယ်။
သဘောကတော့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရင် မြို ့နဲ ့ဝေးကွာတဲ့ နေရာတွေမှာ
ဝယ်ယူခဲ့ရင်လည်း သွားရေး လာရေးအတွက် အထူးတလည် ပူပင်နေစရာ မလိုပါဘူး။
88 ခုနှစ်တုန်းက အစိုးရ ဂိုထောင်တွေ အဖောက်ခံရပြီးနောက် ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ သုတရတနာသိုက်
စာအုပ်တွဲတွေကို ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်တွေဟာ အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ရ မျိုးလား ၈ မျိုးလားတော့
မမှတ်မိတော့ပါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂါတ် မြို ့ပြ တည်ဆောက်ရေး နမူနာ ပုံစံတွေပါပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ
လဲ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့မစားရ ဝခမန်း နမူနာ မော်ဒယ်တွေမှာလဲ အဲဒီလို တည်ဆောက်မယ်လို ့
ဖော်ပြမက်လုံးတွေ ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း စနစ်ကျနတဲ့ မြို ့ပြ အိမ်ယာတွေ မပေါ်ပေါက်လာပဲ သူတလူငါတမင်း
တည်ဆောက်ထားတဲ့ လမ်းမကြီးဘေးက ခိုအိမ်တွေပဲ ကျပ်ညပ်နေပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အခုမြင်ရတဲ့ လမ်းမကြီးဘေးက အိမ်တွေ ဆိုတာ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ လူနေထိုင်မှုမပြုကြပါဘူး။
ကုန်တိုက် စားသောက်ဆိုင် အရောင်းဆိုင် အရက်ဆိုင် ဘား ဘိလိယက် နဲ့အခြား လုပ်ငန်းသုံး အတွက်ပဲ သတ်မှတ်
ထားပါတယ်။ လမ်းမကြီး ဘေးမှာ လူနေထိုင်တာဟာ လူတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေ
ကို တိုးပွားစေပါတယ်။ နောက်တခုက ပလက်ဖောင်းပါ။ အရင်ခတ်က (အင်္ဂလိပ်ခေတ်) အမြင်ကျယ်တဲ ့မြို ့ပြ
အင်ဂျင်နီယာတွေ ဒီဇိုင်း ထုတ်ထားတဲ့ လူသွား ပလက်ဖောင်းဟာ ယခုခေတ် နဲ့ဘယ်လိုမှ ယှဉ်လို ့မရအောင်ကို
သာလွန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို ့ရဲ့အကောင်းဆုံး ပလက်ဖောင်းတွေကို တက္ကသိုလ် နယ်မြေ တစ်ဝိုက်နဲ ့
အချို ့နေရာတွေမှာသာ မြင်တွေ ့နိုင်ပါတော့တယ်။ အခု ပလက်ဖောင်းတွေဟာ လူမပြောနဲ့ခွေး သွားဖို ့တောင်
အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ သူတို ့ဆီမှာ ကျယ်ပြန် ့ညီညာတဲ့ ပလက်ဖောင်းကို လမ်းမ အစပ်မှာ စတီး ပိုက်တန်းတွေ
ကာရံထားပြီး လူသွားလမ်းရဲ ့ဘေးမှာ ထပ်ပြီး ကတ္တရာ ခင်းထား ပြီး အကာ အရံပါရှိတဲ့ စက်ဘီးစီးလမ်းရှိပါတယ်။
ဘလောက်တုံး တခုနဲ့တခုကြားဟာ ဒီကလို လှေကားထောင်တက်ရလောက်အောင် မြင့်မားမှုမျိုး မရှိပဲ တခုနဲ ့တခု
ကြားမှာ ပြေပြေပြစ်ပြစ် ဆင်းသွားပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းမှာ လမ်းလျှောက်ရတာ တကယ့်ကို စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
အဝေးက မြက်က ပိုစိ်မ်းတာ မဟုတ်ပါ။ ခေတ်သစ် လူငယ်များ ပညာရှင်များ မျက်စိမှိတ်ခံထားရတဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာ
ထဲက ဖယောင်းတိုင်ဟာ အလင်းဆုံး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အပြင်ကို ထွက်ကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်လေ အမြင်ဟောင်းလေ ဖြစ်နေတာဟာ ငြင်းလို ့မရတဲ့ လက်တွေ ့ပါ။ လူရွယ်တွေကလဲ မိမိရဲ ့အတ္တနဲ ့
အသိပညာမဲ့မှုကို လူငယ်တွေ အထိ မရိုက်သွင်းစေချင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး ဝတ်ရုံကြီးကို ခဏ ချွတ်ထား
ပြီး လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓါတ် အတွေးအခေါ် ပညာ အင်အားနဲ့တိုင်းပြည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
စင်္ကာပူကိုတော့ ၂နှစ်ခြားစီ ငါးခါလောက် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်တိုင်း သတိထားမိတာက တကြိမ်ထက်တကြိမ် နေဖို့ပိုကောင်း လာတာတွေ့ရတယ်။ ပိုတိုးတက်တာ ပြောတာမဟုတ်ပါ၊ လူတွေအတွက် ပိုစဉ်းစား ပိုလုပ်ပေးထားတာ ပြောတာပါ။
သူတို့ဆီက လူကြီးတွေက ဘာထပ်လုပ်ပေးလို့ရသေးလဲလို့ အမြဲကြဆနေပုံပါပဲ။
ဒီက လူကြီးတွေကတော့ ဘာထပ်လုပ်စားလို့ ရသေးလဲလို့ အမြဲကြဆနေသလားမသိ ??
ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ စင်္ကာပူက မြို့ပြတည်ဆောက်ပုံကို အချက်အလက် စုံစုံလင်လင်ရှိအောင် စုဆောင်းပြီး အများဗဟုသုတအလို့ငှာ ရေးတင်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်.. တစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့
may the myanmar government can learn such kind of development and try to manage like s’pore
မြန်မာလူငယ်တွေ..လူရွယ်တွေဟာ.. တတိယအရွယ်နဲ့.. ( )တွေစည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှုကောင်းတာကြောင့်.. နောင်ဘဝမှ…စင်္ကာပူထက်ကောင်းတဲ့…နိဗ္ဗာန်မှာနေဖို့… နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စပ်ကြား… နတ်ပြည်မှာနေဖို့.. အားစိုက်လုပ်နေကြပါတယ်..။
သင်္ကြန်လို ..ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်မှာတောင်… ဘာမှမလုပ်ပဲ.. နောင်ဘဝအတွက်..မျိုးစေ့တွေချနေကြတာပါ…။
စင်္ကာပူရီယန်တွေ.. သေရင်.. မြန်မာတွေလောက်မခံစားကြရတော့ပါဘူး..။
နောက်ဘဝမှာတော့.. လက် ၁ဝချောင်းထောင်ပြပြီး..ပြောလိုက်မယ်..။
၁ဝ သက်..၁ဝသက်…မြန်မာတွေကိုလိုက်လို့… မမှီတေ့ာဘူးလို့..
သူကြီး ခနဲ့နေတာလား။ သူကြီးဟာ သူကြီး မယုံကြည်ချင်နေပါ နောင်ဘဝဆိုတာလဲမယုံလို့ရတယ်၊ အရင်ဘဝဆိုတာလဲမယုံလို့ရတယ်၊ ကံအကျိုးတရားဆိုတာလဲ မယုံလို့ရတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲ မယုံလို့ရတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလဲ မယုံလို့ရတယ်၊ ဓမ္မဆိုတာလဲ မယုံလို့ရတယ်။ သံဃာကိုလည်း မယုံလို့ရတယ်။ ဒါက သူကြီးအပိုင်း။ သူကြီးဟာ သူကြီး မယုံကြည်ချင်နေပါ။ သူများတကာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ် ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတာကို ခနဲ့တဲ့တဲ့၊ ခပ်နှိမ်နှိမ်နဲ့ စော်ကားသလိုမျိုး မပြောသင့်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ လူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ မိမိအမြင် ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါခွင့် ရှိပေမယ့် သူတပါး ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတာကိုတော့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ စော်ကားသလိုတော့ မပြောသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
သူကြီးရေးလိုက်တဲ့ ကွန်မန့်က ဗမာလူမျိုးတွေကို ခနဲ့ပြီး စော်ကားနေသလိုပါပဲ … သူကြီးကိုယ်တိုင်က ဗမာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုရေးလိုက်တာ အံ့ဩမိတယ် …
ထပ်ပြီးပြောလိုက်ဦးမယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုတိုးတက်ဖို့ရာ ဘာသာရေး လုပ်ရုံနဲ့ အလကားနေရင်း တိုးတက်မလာဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
ခက်ပြီ သူကြီးလဲမှန် erous လဲ လက်တွေ့ဆန် –
အသင် မည်သို့စကားဆို အံ့နည်း…။
ဘာသာရေးဟာ လူမှုဘဝတိုးတက်ရေးကို အနှောက်အယှက်ပြုတယ်လို့ ကျူပ်တော့မထင်မိပါဘူး။ ဘာသာရေးက ထိန်းကွပ် လမ်းကြောင်း ပြုပြင် တည့်မတ် ပေးနိုင်တာတွေလဲ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
လူတော်တွေရဘို့ လူကောင်းတွေ အရင်ဖြစ်နှင့်ရမှာ။
မကောင်းပဲ တော်ကုန်ရင် ဒုက္ခနော် ..။ ဘင်လာဒင် ကိုပဲကြည့်။
parlayar46 ကို ထောက်ခံပါတယ်။ Like ပေးတာ အမှတ်မတက်လို့ မန့်လိုက်ဦးမယ်။ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဟောတဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာ လူမှန်ရင် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့ လူတော်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်းရယ်၊ ပညာဗဟုသုတရှိခြင်း၊ တတ်သိနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ လူတော်ဆိုတဲ့အရည်အချင်းရယ် နှစ်ခုလုံးရှိဖို့ လိုအပ်တယ်တဲ့။ အရည်အချင်းနှစ်ခုလုံး မရှိနိုင်လို့ မဖြစ်မနေ တစ်ခုပဲရွေးပါဆိုရင် လူကောင်းကိုပဲရွေးရမယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် လူကောင်းတစ်ယောက်ဟာ မတော်ရင် ကိုယ့်တစ်ယောက်စာပဲ နစ်နာတာဖြစ်ပေမယ့် (ဘင်လာဒင်လို) လူတော်တစ်ယောက် မကောင်းရင်တော့ လူတွေအများကြီးနစ်နာနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ဒီခေတ်နိုင်ငံရေးတိုင်းဟာ ဘာသာရေးနဲ့ ယှက်နွယ်ပါတ်သက်နေတယ်..။ ကျမ်းစာကိုင်ပြီး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရတွေတောင်ရှိတယ်..။
ဆိုတော့… နိုင်ငံတနိုင်ငံ ကျဆင်းဆုံးရှုံးမှု/တိုးတက်မြင့်မားမှုတွေဟာ ဘာသာရေးနဲ့ သိသိသာသာကို သက်ဆိုင်လာပါတယ်.။
ကမ္ဘာမှာ… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး ၂ခု..
တရုတ်ပြည်နဲ့.. ဂျပန်ဟာ.. ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကောင်းဆုံး ၂နဲ့ ၃မို ့.. ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေ အတွေးအခေါ်တွေ..မှန်မှန်ကန်ကန်ယူတတ်..သုံးတတ်ရင်ဘယ်လောက်အကျိုးများတယ်… သိသာမှာပါ..။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တခုလုံး အကောင်းဆုံးလူသားတဦးအဖြစ် ကမ္ဘာကရွေးပေးထားတဲ့. အိုင်ပေါ့၊ အိုင်ပဒ် ထုတ်လုပ်သူ အကြီးအကဲ .. အက်ပဲလ် စီအီးအို …စတိဗ်ဂျော့ဟာလည်း.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးပါ၊
မြန်မာ(အများးးးစု)ဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးစံနစ်.. ဘယ်တိုင်းပြည်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲနေနေ..။
မြန်မာပီသစွာ ကမ္ဘာမှာမြန်မာနေရာပဲရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်..။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့..အမေရိကား၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်ဝမ်၊ စင်္ကာပူ၊ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အခြေချနေတဲ့.. မြန်မာတွေ ဘဝအဆင့်အတန်းကို…. နေးတစ်မဟုတ်တဲ့.. တခြားအခြေချလူမျိုးတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲလေ့လာ သုတေသနပြုကြည့်..။
မြန်မာပြည်ဟာ.. ဘာသာရေးချုပ်ချယ်မှုအမြှင့်ဆုံးနိုင်ငံတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့..စစ်တမ်းတွေက ဒီနှစ်လည်း ပြဆိုနေပြန်တယ်..။
သဘောက.. မြန်မာတွေ…. ဘာသာရေးအစွန်းရောက်လွန်းနေတယ်ဆိုတာကို …ပြနေတာပါ..။
ကိုယ့် ကိုယ်တိုင်တေ့ာ …ဒီလို မြင်မိတွေးမိမှာမဟုတ်ဘူး…။ ဒီနှစ်ပိုင်း တွေ့သမျှ အမေရိကန်တွေ.. အမေရိကန်နိုင်ငံရေးထဲပါသူတွေက..ဒီအတိုင်းပဲ ပြောနေကြတာ…။
အစွန်းမှ.. တော်တော့်ကို …အစွန်းရောက်လွန်းနေပါတယ်..။
သေသေချာချာ(သေသေချာချာ) ကိုယ်အတွေ့အကြုံ..ဗဟုသုတတွေကို ဖွင့်လှစ်ပြီး… သုံးသပ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါလေ..။
(မြန်မာတွေကို စေတနာမရှိရင်.. မြန်မာလူမျိုးတယောက်အဖြစ် ခံယူထားတဲ့ကျုပ်ဟာ.. ဒီနေရာမှာ ရှိမနေဘူး..။ )
ဟုတ်ပါပြီ သူကြီးရေ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကျမ်းစာကိုင်ပြီး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တာ သေချာတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ.. ဘာသာရေးချုပ်ချယ်မှုအမြှင့်ဆုံးနိုင်ငံတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့..စစ်တမ်းတွေက ဒီနှစ်လည်း ပြဆိုနေပြန်တယ်။
ဘယ်လိုစစ်တမ်းတွေလဲ ဘယ်လို အချက်တွေလဲဆိုတာ ပြောပြပါဦး။
ဘယ်လို အစွန်းရောက်နေလဲ ဆိုတာ ညွှန်းဆိုပြပါဦး။ ဘယ်က data တွေကို ဘယ်လို information ထုတ်ယူရပါသလဲ။ ရတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ပြောပါဦး။ အဲဒီစစ်တမ်းတွေက ဘယ်လို နည်းစနစ်တွေနဲ့ ကောက်ယူထားပါသလဲ။ သိချင်လို့ပါ။
eros ကသတင်းတွေစုပြီးတင်နေတဲ့သူမို ့.. အချက်အလက်..အထောက်အထားတွေကို လိုချင်မှာပဲထင်တာမို ့.. လင့်ခ်တွေပေးပါမယ်..။
အသေးစိတ်တော့ ..ဒေါင်းလုပ်လုပ်.. ဖတ်ပါနော..။
ပိုတိကျတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေလိုချင်ရင်တော့ .. မြန်မာပြည်က.. သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသာ..ချည်းကပ်မေးပေတော့..။
အဲဒီမှာတော့.. ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်း.. ဂိုဏ်းတွေကွဲပြီး.. ဘယ်လိုစစ်ခင်းနေတယ်… မြင်သာပါလိမ့်မယ်..။
ယူအက်စ်စတိတ်ဒီပါးမန့်က.. တကမ္ဘာလုံးကို ခြုံပြီး.. နှစ်စဉ်ထုတ်နေတာပါ..။
အောက်ကလင့်မှာကြည့်ပါ..။ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
အောက်ကလင့်သတင်းတွေက သတင်းဌာနကြီးတွေက.. ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်အတွက် ရေးထားတာ..။
ဒေါက်တာကိုကိုကြီးကတော့.. ဒီနှစ်အတွက်ကို ..မြန်မာတခုထဲရွေးထုတ်ပြီး ..ဟိုက်လိုက်လုပ်..သူ့ဘလော့မှာတင်ထားပေးတယ်..။ ဖတ်ကြည့်ပေါ့..။
(၁)ခင်ဗျား ဖင်ကြီး ပေါ်နေတယ်လို့တကယ်ဖြစ်နေတာကို မြင်တဲ့သူက ပြောပြတော့ အဲဒီ အမျိုးသမီးက
“တော်ပါသေးရဲ့ငါ့ရဲ ့အရှက်က ဒီလူ တစ်ယောက်ထဲ အရှေ ့မှာပဲ ကွဲသေးတယ်။ နီးရာဆိုင်ကို အမြန်ပြေးဝယ်ပြီး
(၂)ခင်ဗျား ဖင်ကြီး ပေါ်နေတယ်လို့တကယ်ဖြစ်နေတာကို မြင်တဲ့သူက ပြောပြတော့ အဲဒီ အမျိုးသမီးက
” ဟဲ့ သေချင်းဆိုး အဲဒါနင်ပြောစရာလား ။ အားအားယားယား မိန်းကလေးဖင်ပဲ လိုက်ကြည့်နေတော့ မြင်မှာပေါ့။
ကြည့်ချင်ရင် နင့်နှမ ဖင် နင်ပြန်ကြည့်…..”
ကျုပ် ကတော့ဗျာ……..ပါးနှစ်ဖက်လုံး ကွဲရင် ကွဲသွားပါစေ….အဲဒီ အမျိုးသမီး ဖင်ကြီး ပေါ်နေတဲ့ အကြောင်း
အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဘာအရောင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ….အဲဒီဘောင်းဘီဟာ ရိရွဲ ဟောင်းနွမ်း ညစ်ထပ် နေပြီ ဖြစ်တဲ့
အကြောင်း……မဝတ်သင့်တော့တဲ့ အကြောင်း အဲဒီ အမျိုးသမီးကို ဆက်လက် သတိပေးမိနေဦးမှာပါပဲ။
အင်း… ပွဲကတော့ ဆူနေပြီ။ ဒီမှာလည်း လမ်းတွေ အတော်ကိုကောင်းတာ။ ကလေးလှည်းတွန်း သွားတာများ ငြိမ့်နေတာပဲ။ အထဲက ကလေးအိပ်နေတာ နိုးတောင်မနိုးဘူး။ အဘုအထစ် မရှိဘူး။ လူကူးမျဉ်းကျားနေရာတိုင်းမှာ ဆင်ခြေလျှောလေးတွေမို့ လှည်းကို အလိုက်သင့် တွန်းရုံပဲ။ ဘယ်လိုအထပ်မြင့် နေရာသွားသွား ကလေးလှည်းတွန်းဖို့ နေရာလုပ်ပေးထားတယ်။ ကားပါကင်မှာလည်း မသန်မစွမ်းကားရပ်ဖို့ နေရာမှာ အမှတ်အသားရှိတယ် တခြားကားလုံးဝရပ်လို့ မရဘူး။ ဒဏ်ငွေဈေးအရမ်းကြီးတယ်။ တခါကဆိုရင် ခြေနှစ်ဖက်လုံးမပါဘူး ကားမောင်းလာတာ ပြီးတော့ လှည်းလေးပေါ် သူ့ဘာသာရွှေ့ပြီး ကားပေါ်က နိမ့်ဆင်းလာတယ် ပြီးတော့ လှည်းလေး မောင်းထွက်သွားပြီး mall ထဲကို ဈေးဝယ်ဖို့ ဝင်သွားတယ်။ အပိုလူ တယောက်မှမပါဘူး remove နဲ့ပဲလုပ်သွားတာ။ အံ့ဩလွန်းလို့ အစအဆုံးလိုက်ကြည့်တာပေါ့။ မသန်ပေမဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးစရာမလိုဘူး။
သူကြီး စာရေးရင် သတိထားရေးသင့်ပါတယ်။
မနေနိုင်လို့ ရေးချင်ရင်လဲ တခြားနာမည်သုံးပြီးရေးဘို့ အကြံပေးချင်တယ်ဗျာ။
အဲလို လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုအောင်ပုကို ကို သူကြီးတင်လိုက်မယ်နော…။
ကဲကဲ………. ပို့စ်က စင်္ကာပူတိုးတက်တာကိုပြောပြီး ဘာသာရေးကိုရောက်လာတယ်..ဘာသာရေးနဲတော့ မဆိုင်ဘူးထင်တာပဲ.. မယုံရင် စင်္ကာပူကို စီးပွါးရေ ပိတ်ဆို့မူ့ ၁၅ နှစ်လောက်လုပ်ကြည့် ………………………………..
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဝင်ပြောပြန်ရင်လဲ ပူညံ ပူညံ ဖြစ်ကုန်ကြတော့မှာပဲ
ကျွန်တော့်ဖာသာ တွေးမြင်သဘောပေါက်ထားတာကတော့ အစိုးရက ဘာသာရေးကိုအသုံးချနေတယ်ဆိုတာထက် မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘာသာရေးအပေါ်မှာ နားလည်မှုတွေလွဲ၊ လက်တွေ့ဘဝတွေထဲကို လိုသည်၊ မလိုသည် ခွဲခြားမတွေးတောဘဲ ကိုယ့်စိတ်ထင်ရာ အယူတွေကို လက်ခံကျင့်သုံးနေကြခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့ အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ မြင်တယ်။
ဒီတော့ကာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းစစ်စစ်များဘဝကိုလဲ မရောက်၊ ပုထုဇဉ်စစ်စစ်လိုလဲ မကျင့်မကြံ၊ အလယ်ကောင်မှာ ကားယားကြီးနဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်နေကြတော့တာပေါ့။ ဘာသာရေးဆိုတာ လူတွေနဲ့ လိုက်လံဆွေးနွေးနေဖို့မလိုပါဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသက်သက်သာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဖာသာလိုက်နာကျင့်သုံးတာပဲကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်သိမြင်ခဲ့ရသလောက်ဆိုရင်တော့ မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများဟာ ရုပ်ဝါဒီတွေကို တော်တော်လေး ရွံမုန်းစရာတစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းရာသည်သာ ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန် လို့ အတော်များများ ဩဝါဒ ပေးကြတာကြားဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ကာ မိမိလက်လှမ်းမမှီနိုင်သည့် အနေအထားမှ လူများအကြောင်းကို လိုတဲ့အချက်လေးတွေ ဆွဲဆွဲထောက်ပြပြီး ငွေကြေးပင်ချမ်းသာပါသော်ငြား လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟများဖြင့် လောင်ကျွမ်းပူလောင်နေကြပုံကိုသာ အများအားဖြင့် ဥပမာပေးကြပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ ငွေကြေးကို အသည်းအသန်ရှာဖွေနေလျင် ချီးမွမ်းခြင်းမပြုကြဘဲ လိုက်လံကန့်ကွက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်းများ လုပ်နေကြခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် လူချမ်းသာနှင့် လူဆင်းရဲဟူသော လူတန်းစား(၂)ရပ်သာ သီးသန့်ကြီးတည်ရှိနေခြင်းဟုမြင်ပါသည်။ လူလတ်တန်းစားများမရှိကြသည့်အတွက် အဆိုပါလူတန်းစား(၂)ခုကို ဆက်သွယ်ပေးနိုင်မည့် ပေါင်းကူးတံတားတစ်ခု ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းကို ရှာဖွေနေသူ ပေါများပါ၏။
လောကစည်းစိမ်များကိုမူ အားကြိုးမာန်တက် ရှာဖွေခြင်းမရှိကြသောကြောင့်
သူများနိုင်ငံများ တိုးတက်ကြီးပွားနေကြသည်ကို မုဒိတာ ပွားကြပါကုန်။
ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန် စိတ်ကိုသာ နေ့စဉ် အာဟာရအဖြစ်စားသုံးကြပါလော့။
ကျွန်တော့်အမြင် တည့်တည့်ပြောရလျင်တော့ဖြင့် မြန်မာမျိုးဆက်သစ်များ လမ်းရိုး၊ လမ်းဟောင်းမှ ဖောက်ထွက်ပြီး ကိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ကြိုးစားသင့်ကြသည်ဟု ထင်မိပါကြောင်း….
ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးများဟာ ပျင်းခြင်း နဲ့ ရောင့်ရဲခြင်း။ ဝီရိယရှိခြင်းနဲ့ ဝိသမလောဘရှိခြင်း၊ လောဘရှိခြင်းကို မခွဲတတ်သေးတာ။ဒါကြောင့် မကြီးပွား မတိုးတတ်နိုင်တာ။
ပျင်းလို့ အလုပ်မလုပ်ချင်ပဲ အိမ်မှာ စားစရာရှိရင်တော်ပြီ ဆိုပြီး နှပ်နေတာက ပျင်းတာ ရောင့်ရဲတာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် အားပါးတရ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသော်လည်း အောင်မြင်မှုမှာ ရာနှုန်းပြည့် မရမှုအပေါ်မှာ ပူလောင်သောက မရှိခြင်း၊ စိတ်မပျက်ခြင်းတို့သည် ရောင့်ရဲခြင်း။
လုပ်ဆောင်စရာတခုအား ရေကုန်ရေခန်း ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် အားပါးတရ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခြင်းသည် ပိုမို ကြီးပွားတိုးတတ်အော် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဝီရိယ၊ လောဘကြီးနေတာမဟုတ်ဘူး။
သူတပါးအား ထိခိုက်နစ်နာစေရန်လုပ်ဆောင်ပြီး မိမိအတွက်သာ အကျိုးအမြတ်ရစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လောဘ၊ ဝိသမလောဘ။ ဥပမာအားဖြင့် ပစ္စည်းတခု ကို ဝယ်သူက ဝယ်ရာမှာ တခြားက မဝယ်နိုင်ရန်ပိတ်ပင်ထားပြီး မိမိထံမှ ဝယ်ယူရာတွင်လည်းဈေးကို အများရောင်းဈေး မဟုတ်ပဲ မတန်တဆမြှင့်တင်ထားခြင်း။ သင့်တင့်မျှတသော အမြတ်အစွန်းမဟုတ်ပဲ မတန်တဆ အမြတ်ယူထားခြင်း။ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ၁၀ဝ ဖိုးယူထားပြီး ၅ဝဖိုးပဲ ဝန်ဆောင်မှုပဲပေးခြင်း။ ဥပမာ ကျွန်တော် ပုဂံကို သွားတယ်။ ပြောင်းဖူးပြုတ်ဝယ်စားတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ပြောင်းဖူးပြုတ်က တဖူး ၁၀၀၊ ကျွန်တော့်ကို တော့ ၁၅ဝနဲ့ရောင်းတယ်။ လူစိမ်းဆိုတာသိနေတာကိုး။ ကျျွှန်တော်လဲ ရန်ကုန်နဲ့ အတူတူပဲ လို့တွေးလိုက်မိတယ်။ စုံစမ်းကြည့်မှ တဖူး ၁၀၀၊ နောက်ကို အဲလို ဝိသမလောဘရှိတဲ့ ဈေးသည်ဆီက လုံးဝ ဝယ်မစားဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးကို ဝိသမလောဘ။
မြန်မာတွေ မတိုးတတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အတ္တဆန်တာ ကိုယ့်ဖို့ချည်းပဲကြည့်တာ။ စည်းကမ်းမရှိတာ။ တန်ရာတန်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပြန်မပေးချင်တာ။ ဘက်နှစ်ဖက်မျှမကြည့်တက်တာ။ မနာလို ဝန်တိုများတာ။ ဒါတွေလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မလုပ်ပဲ သူတပါးအပေါ် ကလိန်ကကျစ်ကျတက်တယ်။ ဘယ်လို ခေါင်းပုံဖြတ်ရမလဲ။ ဘယ်လို အင်ထုရမလဲ စဉ်းစားနေတာ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ မတိုးတတ်တာ။
ဟုတ်ပတော်ရေ တော်တို့ပြောတာတွေက အားလုံးအမှန်တွေပါ…………..
တခြားအကြောင်းတွေကို ဟုတ်ပတာကတော့ ပြောလိုပါဘူး
ဟို ခုနစ်တန်းတောင်မအောင်တဲ့ အရက်သမား မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကို
အဲ့သည်ငပေါက မြှောက်ပေးရင် xxx တက်အောင်ကမှာ
စင်္ကာပူနိုင်ငံတိုးတက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းကဘာလဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မတိုးတက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းကဘာလဲ။
အိုဗျာ.. သဂျီးဘာပြောပြော လက်မခံဘူး။ ဘာသာရေးကိုစော်ကားတဲ့ သဂျီးကို ဝိုင်းချကြပါဗျို့……
သဂျီးကို ချခိုင်းတာ နင့်အပူဘာပါလို့ ငါ့ကွန်မန့်ကို အနှုတ်ပေးရတာလည်း။ သဂျီးကို ဝိုင်းဆဲကြပါဗျို့…
အန်တီဝေရေ.. ကျနော်ခရီးတိုတခုထွက်သွားလို့ ဒီရက်ပိုင်းပျောက်နေတာပါ။ အခု အဓမ္မဝါဒီ သဂျီးကို ဆော်ဖို့ ကြောင်ကြီးပြန်လာပြီ….
ကိုကြောင်ကြီး ပျောက်နေပါလား .. ကြောင်ပျောက်ကြော်ငြာတော့မလို့
စင်္ကာပူနဲ့မြန်မာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွာတာတွေကို အသာထားဦး
စင်္ကာပူမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြတ်ရှောက်သွားရင် “ရွှတ်ရွှတ်” “ချွတ်ချွတ်” အဲလိုအသံမျိုး တစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး…
စင်္ကာပူမှာ ကားမှတ်တိုင် စက်လှေကား MRT စတဲ့လူများတဲ့နေရာတွေမှာ တချိူ့အတွဲတွေအမြင်မတော်နေထိုင်နေတာတွေ့တော့ စိတ်ထဲကရှံ့ချမိတယ်..မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့…ရန်ကုန်မှာ သူတို့ထက်တောင်ဆိုးနေတာတွေ့ရတယ်….ပြီးရော…မဟုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ အညံမခံတာတို့တိုင်းပြည်ဘဲ
သဂျီးနော် သဂျီး … ကိုယ်ထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို မေ့နေပြီလား ….
သဂျီးက မြန်မာ ဆင်းရဲတာ ဘာသာရေး ကြောင့်တဲ့။
မြန်မာ ပြည်မှာ နေတဲ့ ကုလားတဲ့ တရုတ် ချမ်းသာတာ ဘာသာမတူလို့ ဆိုလို့ ချမ်းသာ သွားကြတယ်လို့ ဆိုလို သလားကွဲ့။
တောင်သူ ဦးကြီး မြန်မာ လူမျိုး တွေရဲ့ အလုပ်ချိန် ဘယ်လောက် ရှိသလဲ သိလား။
မနက် ၅နာရီ ထပြီး ထမင်းစားသောက် လယ်ထဲ ကို ၆နာရီ ဆင်းကြတယ်။ မနက် ၁ဝနာရီဆို လယ်က ပြန်တယ်။ အလုပ် သိပ်များတဲ့ နေ့ဆိုရင် ၁၂နာရီ အထိ နေတယ်။ တနေ့တာ အလုပ်ချိန် ပြီးသွားပြီ။ ၁၂နာရီ နောက်ပိုင်း ဂျွမ်းထိုးမလား အတင်းပြောမလား အိမ်လည် သွားမလား ရွာလည် လျောက်မလား ကြိုက်သလို လုပ်လို့ရတယ်။ လျှပ်စစ်မီး မရှိတဲ့ ရွာဆို စောစော အိပ်တာပေါ့..လျှပ်စစ်မီး ရှိတဲ့ ရွာဆိုရင် ရုပ်ရှင်လေး ဘာလေးကြည့်ပြီး အိပ်တာပေါ့။ သူတို့ လုပ်တာနဲ့ သူတို့ မိသားစု စားလောက်နေတယ် ဘာမှ မပူရဘူး။ အေးအေးနေ အေးအေးစား.. ဒီလိုနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းတာ.. ခတ်မှီ သစ်ဆန်းတဲ့ ဘဝ နေထိုင်မှု ပစ္စည်းတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မမျှော်လင့်ဘူး မြင်လည်း မမြင်ဘူးဘူး။ အေးဆေးပဲ။ အဝေးက လာတဲ့ တရုတ် နဲ့ ကုလား ပိုက်ဆံ အထုပ်လိုက် ကိုင်ပြီး မိုးပေါ်က ကျလာတာ မဟုတ်ဘူး တရွာ မပြောင်း သူကောင်း မဖြစ် ဆိုတဲ့ စကား အတိုင်း ပြောင်းရွေ့လာတာ.. ဘာမှ ပါလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ သူများ ထက် ပိုလုပ်တယ် ပိုစုတယ်.. မျိုးဆက် ၂ဆက် ၃ဆက်လောက် ဖြစ်တဲ့အခါမှာ.. တရုတ် ကုလား ချမ်းသာ လာကြတယ်။
သဂျီးအခုလက်ရှိအခြေအနေက မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကထက် ပိုပြီး ချမ်းသာချင် ချမ်းသာလာမယ် မြန်မာပြည်မှာလို ဒူးနမ့်ပြီး တနေကုန် အိပ်နိုင်ပါ့မလား။ သူများ အရပ်ရောက်ရင် သူများတွေနဲ့ တန်းတူ နေနိုင်စားနိုင်ဖို့ အလုပ်ပိုလုပ်ရတယ်။
ဘာသာရေး ရှုံ့ချ လို့ အသားတွေ အဆီတွေ တက်လာမလား။ အမုန်းခံရတာ အပြင် အပိုမရှိဘူး။ သဂျီး ရဲ့ ဘာသာရေး ပြောတာတွေ အဆင်မပြေတော့ ဝိုင်းဝန်း နိပ်ကွပ်ကြ ပြောကြနဲ့ သဂျီးလည်း သဂျီး မဟုတ်တော့ပဲ လူပေါကြီး ဖြစ်နေမယ်။
လူတွေက ယုံကြည်တဲ့ အရာကို စွန့်လွတ်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ကြတယ်။ ရုပ်ဝါဒီ ဆန်နေလို့ စွန့်လွတ်ဖို့ ဝိုင်းပြောတာတောင် အခုထိ ခေါင်းမာနေသေးတာပဲ။
စာဖတ်တတ်ယုံနဲ့ စာတွေ အကုန် မသိနိုင်သလို.. သဂျီးလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါလို့ ပြောတိုင်း သဂျီး က ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်အရသာကို မသိပဲ လျောက်ပြောနေသလို ဖြစ်နေပြီ။
အမေရိကန်ကို ရောက်တာ ကြာတော့ ဘဝ မေ့တာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ဒီတိုင်းပြည်က လူတွေကို သိပ်အထင်သေးလွန်းတယ်။
တရုတ်ပြည်က ချမ်းသာတာ သူတို့ ဆီက ကြိုးစားလို့… သူတို့ ချမ်းသာမှုက အမေရိကန်ကိုတောင် သူက စီးပွားရေး ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေပြီ။ ဈေးကွက် တော်တော် များများ တရုတ်က ချုပ်ကိုင်ထားတယ်။
တရုတ်ပြည် အချိန်က သိပ်ဆင်းရဲကြတယ်။ တရုတ်တွေ တရုတ်ပြည်က ထွက်ပြီး ကမာ္ဘအနှံကို သွားကြတယ်။ ထွက်သွားတဲ့ တရုတ်တွေက နိုင်ငံတိုင်းမှာ တရုတ်အသင်းတွေ ရှိတယ်။ အသင်းတွေကို အလှူထည့်ကြတယ် ဘာလုပ်တာလဲ သိလား.. တရုတ်ပြည်မှာ လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ လုပ်ပေးကြတယ်။ တရုတ်ပြည် ကောင်းစားဖို့ ကမာ္ဘ အနှံက တရုတ်တွေ ရှာတာတွေ လှူကြတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း တရုတ်ပြည် ချမ်းသာလာတော့ ထောက်ပံ့တဲ့ တရုတ်တွေကိုတောင် တရုတ်ပြည်မကြီးက တရုတ် စာရင်း မသွင်းတော့ဘူး။ တရုတ်ပြည် ချမ်းသာတာ သူတို့ ဟာသူတို့ ချမ်းသာတာလို့ ကြွေးကြော်တယ်။ တရုတ်ပြည်မ က တရုတ်မှ တရုတ် အစစ် တရုတ်ပြည်ပြင်ပက တရုတ် ကို ကပြားလို့ သူတို့က ပြောတယ်။
မြန်မာပြည် ချမ်းသာ စေချင်ရင် ဒီလို လုပ်လို့ ရနိုင်မလား… ရရင်တော့ မြန်မာပြည်ကြီးလည်း တမျိုးတဖုံ ဖြစ်နိုင် ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည် ပြင်ပမှာ မြန်မာ လူမျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်နေပြီ။ အပြင်မှာ အကြာကြီး မနေဘူးတော့ သေချာတော့ မသိဘူး.. အပြင်က မြန်မာတွေလည်း အချင်းချင်း သိပ်မတည့်ဘူး ဆိုလား.. သီးလေးသီး သံချပ်ထဲမှာ ကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့.. အဝေးက လူ ပိုသိကြမှာပေါ့။
ဒါတောင် တစ်ချို့ စကာင်္ပူမှာနေတဲ့သူတွေများ စကာင်္ပူက မြန်မာပြည်လို သဘာဝအလှမဟုတ်ပါဘူးကွာလုပ်သေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းအောင်ထားရင်း မြို့ထဲမှာ လမ်းမကြီးတွေဘေးအချို့နေရာတွေမှာ မိုးသစ်တော အပိုင်းအစတွေကို ပြထားတာ အရမ်းသဘောကျတယ်။ တကယ့်သဘာဝတောလိုမျိုး။ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လိုမှ လိုက်မလုပ်နိုင်ဘူး။ အပျင်းကြီးလို့။ စံနှုန်းတွေ နိမ့်ပြီး ဖြစ်ပြီးရောလုပ်တာကို လက်ခံထားလို့။
သူကြီးရေ ကျေးဇူးပါပဲ။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ အောက်မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်းမို့လို့ ထင်တာပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်ဗျာ။
သူကြီးက အမေရိကန်ဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘုန်ကြီးကျောင်းလေးသွားလိုက်၊ တရားလေးလုပ်လိုက်၊ မသေရေစာလေး ရှာစားလိုက်လုပ်နေတယ်ထင်တယ်။မြန်မာလူမျိုးများ သေချာပေါက်လိုက်မေးလိုက် မကြီးပွားချင်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ပျော်ချင်တဲ့ပွဲတွေမှာ ဘာသာရေးကြောင့် မပျော်ပဲ ငွေမလည်ဘူး၊ မဖွံ့ဖြိုးဘူး ထင်နေတယ် ထင်တယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ သေအောင်အလုပ်လုပ်တာတောင် ပျော်စရာ ပိုက်ဆံမရှိတာဗျ။ လုပ်ချင်တာတောင် အလုပ်ကလဲ ရှားတယ်ဗျာ။ လုပ်ခကလဲ စားရယုံပဲရတယ်။ အစစအရာရာ ဈေးကတတ်နေသေးတယ်။ဒီတော့ လူလတ်တန်းစားကနေ အခြေခံဘဝ လျှောရတာပေါ့ဗျာ။ ရွာတို့ နယ်တို့မှာ တော့ အရင်းအနှီးမရှိလို့ မလုပ်နိုင်တာရယ်။ ရောင့်ရဲခြင်း အကြောင်းပြ ပျင်းတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။
သာသနာရေးက ကိစ္စကတော့ ကျုပ်တို့ သာမန်ပြည်သူတွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ ဘုန်းကြီးတွေ အကြောင်း မကောင်းသတင်း၊ အဆိုးရွားဆုံးသတင်းတွေ လည်း နားမဆန့်အောင် အဖြစ်မှန်တွေ ကြားရပါဗျ။
သူတပါးအား ထိခိုက်နစ်နာစေရန်လုပ်ဆောင်ပြီး မိမိအတွက်သာ အကျိုးအမြတ်ရစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လောဘ၊ ဝိသမလောဘ။
မန်မာတွေ မတိုးတတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အတ္တဆန်တာ ကိုယ့်ဖို့ချည်းပဲကြည့်တာ။ စည်းကမ်းမရှိတာ။ တန်ရာတန်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပြန်မပေးချင်တာ။ ဘက်နှစ်ဖက်မျှမကြည့်တက်တာ။ မနာလို ဝန်တိုများတာ။
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မလုပ်ပဲ သူတပါးအပေါ် ကလိန်ကကျစ်ကျတက်တယ်။ ဘယ်လို ခေါင်းပုံဖြတ်ရမလဲ။ ဘယ်လို အင်ထုရမလဲ စဉ်းစားနေတာ။ ပြီးပြီးရောလုပ်တက်တာပါ။
သူကြီးရေ ဂျပန်တွေ ကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံလို့ မသတ်မှတ်ချင်ဘူးဗျာ။
ကဲ သူကြီးရဲ့ အသံတွေ ကြားချင်တယ်!!!!!!!!!!! ( R ဇာနည်လေသံဖြင့်ဖတ်ရန် )
သူကြီးရေ အကြမ်းဖတ်ကြည့်ရသလောက် အဲဒီ report တွေထဲမှာ မြန်မာတွေ မတိုးတက်တာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တာနဲ့ ဆက်စပ်မိတာမတွေ့ပါလားဗျ။ ဆက်စပ်မိတာရှိရင် ရှင်းပေးဗျာ။ ဗဟုသုတ ရချင်တယ်။ ကြုံတုန်း သူကြီးဆီ အကူအညီတခုတောင်းချင်တယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်က လေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေ အကြောင်း အတွေ့ အကြုံတွေ ရေးထားတဲ့( လေယာဉ်မှုးတွေ ကိုယ်တိုင်ရေးထားရင်တော့ ပို ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ dam busters ) စာအုပ်တွေ ရှိရင်လိုချင်တယ်ဗျာ။အခြား operation အကြောင်းတွေရောပေါ့။ PDF format နဲ့ free download ရမယ့်နေရာ ရှိရင် ညွှန်းဗျာ။
ကျနော် မောင်ဖက်တီးမှာ ဒီပိုစ်လေးတင်ပြီးသကာလ တုပ်ကွေးမိနေသောကြောင့် online မလာနိုင်တော့ပါ။
ယနေ့မှသက်သာရာရသဖြင့် online ပြန်ထိုင်ကြည့်ရာ ….. အလွန့်အလွန် အံဩဘွယ်ကောင်းသော ကွန်မန့်များကို
တွေလိုက်ရလေတော့သတည်း ..။ အားလုံးအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရျိပါကြောင်းလည်းပြောကြားလိုက်ရပေသည်။
စကာင်္ပူမှ ကျနော် နှစ်သက်သော အချို့အချက်များ ဆက်မရေးဝံ့တော့ပါ ..။ မနှစ်သက်သော အချက်တခုတည်းကို
တော့ဖြင့် ရေးလိုက်ပါရစေ …။ အဲဒါကတော့ အချို့စကာင်္ပူသူ စကာင်္ပူသားများ credit card များဖြင့် ဈေးဝယ်ချင်
တိုင်းဝယ်ကြပြီး အကြွေးမဆပ်နိုင်ကြသဖြင့် တိုက်ပေါ်က ခုန်ချပြီး သေဆုံးမှု …။ MRT ရှေ့မှောက်အိပ်ပြိးကိုယ့်ကိိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်လိုက်မှုများ .. များသထက်များလာကြောင်းပါ .. ခင်ဗျား …။
ဂလိုလဲ မဟုတ်သေးဘူးလေ ဦးဖက်ရဲ့ ဆက်ရေးပါဗျ။ ဖတ်ချင်လို့ပါ။
တိုးတက်တယ်ဆိုတာ.. အဲဒီလိုမျိုးငြင်းခုန်..အတိုက်အခံပြုမှ…ဖြစ်တာ… ဆရာဖက်တီးေ၇…
ဒီရွာသားတွေဆို.. ပိုလို့တောင်… အတိုက်အခံပြောကြစေချင်ပါသေးတယ်..။
တခြားသူတွေနဲ့… မတူသောအတွေးများနဲ့… ရေးကြ..တွေးကြ..ပြောကြစေချင်တာပါပဲ..။
ဟုတ်တယ်။ သူကြီးပြောတာထောက်ခံတယ်။ ကျုပ်တို့အားလုံး “အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား” စကားလုံးလေး အပေါ်မှာ မွေ့လျော်နေခဲ့လို့ ဘာဖြစ်နေလဲ။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့် ရဲ့ မြန်မာတွေ တိုးတက်ဖို့ရာလိုအပ်ချက်တွေ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါဗျိုး ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
အော်သူကြီးရယ် … ဆောင်းပါးလေးများဝယ်မလားလို့ … ဟန်လုပ်ပြီး ဆက်မရေးဝံ့တော့ပါဘူးဆိုကာမှ …………
နန်းကြီးသုပ်တပွဲမနေနိုင်လို့စားခဲ့တာ $4 .. 2800 ကျပ်ဆိုတော့ ….. ဆိုတော့ …..။
စလုံး၄ကျပ်လား…ရန်ကုန် လေဆိပ်မှာ မုန့်ဟင်းခါး စားရင် ဒေါ်လှ ၂ဝကျမယ်။
အဲဒါသာကြည့်တော့ မုန့်ဟင်းခါးတပွဲ ၁၆၀၀ဝ လောက်ဆိုတော့ ဘယ်လောက် ဝိသမလောဘဆန်သလဲဆိုတာ။ ဒါကြောင့် သူများတွေလို မတိုးတက်တာ။
ဆောတီးကွယ်.. ဆူး အရေးမှားသွားလို့..
လေဆိပ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ မုန့်ဟင်းခါး ၂ဒေါ်လာ နန်းကြီးသုတ် ၂ဒေါ်လာ ငါးကြော် အာလူးချောင်း ၅ဒေါ်လာ ကော်ဖီ ၅ဒေါ်လာ စားတာများတော့ အကျများသွားလို့ အမှတ်ရောသွားတာ.. အဟီး.. ချောတီးနော်..
အဲလောက် လောဘ မကြီးရှာပါဘူး။
နောက်ဆို ဆူးပြောစကား ၁ဝနဲ့စား၊ ကျန်တဲ့တဝက် ယုံရခက်…
ရက်စက်လိုက်တာ.. တခါလေး မှားမိတာကို.. မှားတာကို ခပ်တည်တည် နဲ့ ဝန်ခံထားတာတောင် ရတော့ဘူးလား။
စလုံးမှာ မနေတဲ့လူတွေကတော့ စလုံး ကိုနေချင်စရာလို့ တွေးမိကောင်းတွေးမိမယ်။ အခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေရ တဲ့လူတွေက တော့အားလုံးလိုလို ကိုယ့်မြန်မာပြည် ပြန်ပြေးချင်ကြ မယ်လို့ ထင်တာပဲ။ လုပ်ရတာနဲ့ ပြန်ရတာ တန်ကို မတန်တာပါ…. မြန်မာဆို ဘယ်သွားသွား နေရာတိုင်းမှာ အနှိမ်ခံရတယ်…. တစ်ချို့ဆို မြန်မာ ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ဆိုတာတောင်မသိကြဘူး
မြန်မာကိုပြောချင်တိုင်းပြောနေကျတာတွေ မခံချင်လဲ ဆက်အပြောခံ
မည်သူတဦးတယောက်မှ မပြောဆိုမှသာလျှင် တခြား
တိုင်းပြည်မှ လူများအားလုံးပြောသင့်တာပဲပြောမည် ဖြစ်ပါသည်။